UJYAALO ONLINE :: Nepal News, Nepali Samachar
Thu, Aug 13, 2020 | 19:59:14 NST
काठमाडौं, जेठ १७ – नेपाल राष्ट्र बैंकले आज तोकेको विनिमय दर अनुसार एक साउदी रियालको खरिददर २८ रुपैयाँ ६९ पैसा र विक्रिदर २८ रुपैयाँ ८५ रुपैयाँ रहेको छ ।
फलोअप : युएईको सारजाहमा अलपत्र १० नेपाली नेपाल फर्किए
उमाकान्त पाण्डे/उज्यालो । युएई, जेठ् १६ – युएईको सारजाहमा गएको तीन महिनादेखि अलपत्र १० जना नेपाली कामदार आज नेपाल फर्किएका छन् ।
​‘सय ग्राम सुन ल्याउन पाइन्छ, तर भन्सार तिर्न पर्दैन भन्ने नसोच्नुस्’
काठमाडौं, जेठ १६ – आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा विदेशबाट १ सय ग्रामसम्म सुन ल्याउन पाइने उल्लेख थियो ।
आफ्नै कथा आफनै भाका
​लगानी गर्न लगन कुर्नु पर्दैन
सम्पन्न र सुखी जीवन सबैको चाहना हो । कोहीले यसलाई सपनामा मात्र सीमित राख्छन भने केहीले सुखी जीवनको आनन्द लिँदै अरुलाई पनि सुखी र खुसी बनाउन सक्षम हुन्छन । सम्पन्नता प्राप्त गर्नका लागि धेरै कुराले प्रभाव पार्दछ । ती धेरै कुराहरु मध्ये व्यक्ति...
​परदेशीका श्रीमतीलाई दोषी देख्ने कहिलेसम्म ?
एक महिलालाई कुटपिट भयो । घरबाट निकालियो । दुव्र्यवहार भयो । घरमा सम्मान पाइनन् भन्ने सुन्नुभयो भने तपाईं के सोच्नुहुन्छ ? धेरैलाई लाग्न सक्छ महिला नै गलत हुन् । अझ अहिले सामाजिक सञ्जालमा श्रीमान विदेशमा यता श्रीमतीले रमाइलो गरिन, दोस्रो बिहे गर्ने ब...
तर्पाँइका प्रश्न विज्ञका उत्तर
वैदेशिक रोजगारमा रहेको व्यक्तिको परिवारले क्यान्सर जस्तो रोग लागेमा नेपाल सरकारबाट कस्तो सहायता पाइन्छ ?
कम्पनी बन्द भएर करार अवधी नसकी नेपाल फर्काएमा के कस्तो सहायता पाइन्छ ?
कतारबाट तीन महिना नपुग्दै फर्किए कहाँ कस्तो क्षतिपूर्ति पाइन्छ ?
मेडिकल अनफिट भएर फर्किए कति दिन भित्र उजुरी गर्दा क्षतिपूर्ति पाइन्छ ?
नाम / ठेगाना उल्लेख नभएको
मेडिकलमा अनफिट भएर पनि दलालले फिट छौ भनेर एक लाख ५० हजार लियो। कसरी फिर्ता लिने ?
कुन देश कस्ता More